Steel ji kpachie oghere Suppliers na Factory - China Steel ji kpachie oghere Manufacturers
Ji kpachie oghere
Steel ji kpachie oghere
Mejupụtara Steel ji kpachie oghere
Ikwunye Na Steel ji kpachie oghere
Serrated Steel ji kpachie oghere
Pụrụ iche Mee Steel ji kpachie oghere
Welded Steel ji kpachie oghere
FRP ji kpachie oghere
Galvanized mpempe akwụkwọ
2019 New Style China FDA achara tingcha Board achara ...
Ngwunye ígwè na-ewepụta akụrụngwa nke ụlọ ọrụ si ụlọ ọrụ Italiantali ORSOGRIL. A na-ekesa ígwè dị larịị na nchara gbagọrọ agbagọ na oge ụfọdụ. Kọmputa a na-achịkwa ịgbado ọkụ na-arụ ọrụ na-eme ka igwe gbagoro agbagọ na nchara nchara iji nweta nkwonkwo mgbatị siri ike. Igwe osisi ahụ dị larịị ma nwee grating ígwè nwere oke ike dị elu.
Iji hụ na nchekwa nke ngwongwo gị, ndị ọkachamara, ndị nwere mmekọrịta gburugburu ebe obibi, ọrụ dị mfe ma rụọ ọrụ dị mma.
Ma ị bụ onye mbido ịchọrọ ụlọ ọrụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ma ọ bụ naanị otu ihe mpempe akwụkwọ na-emepụta ihe… ABE
FRP grating ọ na-egbo mkpa gị?
Kedu ụdị, nkọwa na si ...
Gịnị bụ uru nke ígwè ji kpachie oghere ...
Adreesị: Mita 50 na ndịda nke ụzọ warara okporo ụzọ Weier na Jingliu Road, Anping County, Hengshui City, Province Hebei